वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी नेकपाको निर्णय मधेश विरोधी : सांसद यादव – Mission Khoj
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी नेकपाको निर्णय मधेश विरोधी : सांसद यादव
प्रकाशित मिति: २०७७, असार ६ गते शनिबार
बीरगन्ज । पर्साको क्षेत्र नं. १ का सांसद प्रदीप यादवले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी नेकपाको निर्णय मधेश विरोधी भएको बताएका छन् ।
उनले भने “नेकपाको यो निर्णय मधेसी जनताको अस्मितामाथि आक्रमण हो ।” यतिमात्र होइन, विवाह भएको ७ बर्ष पछि मात्र बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने भनेर नेकपाले गरेको निर्णयले मधेशको संस्कृति माथी नै प्रहार भएको सांसद यादवको ठहर छ ।
“मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशीहरूको भारतको बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल लगायतको ठाउँमा एक अर्का बीच बिहेबारीको छ” सांसद यादवले भने “यो दुईटै देशको राजनीतिक नक्साभन्दा पहिले देखि कायम छ ।” यो परम्परा दुवै देशको जीवनसंग जोडिएको हुनाले नेकपाको निर्णयले सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या उत्पन्न गराउने उनको भनाई छ ।
परम्परागत सांस्कृतिक सम्बन्धलाई तोड्न नेकपाले कसैको डिजाइनमा मधेशी विरोधी निर्णय सांसद यादवको आरोप छ । उनले भने “यस्तो जनविरोधी निर्णयको म घोर विरोध गर्दछु ।”
सांसद यादवले विधेयक पास भएको खण्डमा मधेशी समुदाय प्रभावित हुने बताए । “यदि यो विधेयक पास गर्न खोजियो भने हामी संसद र सड़कमा यसको विरुद्धमा आवाज उठाउँछौं” यादवले चेतावनी दिए ।
सांसद यादवले भने “विवाह भएको एक बर्षमा बच्चा जन्मिन्छ, जन्मदर्ता कसरी गर्ने? त्यतिमात्र होइन, विवाह भएर आएकी महिलाले लोकसेवा आयोगको जाँच दिनु पर्यो दिन पाउने की नपाउने? विदेशमा रहेको श्रीमानसंगै बस्न नेपाली राहदानी बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ?
सातवर्ष अगावै श्रीमानको देहान्त भयो, के हुन्छ ? उसले अंश पाउन र नाता प्रमाणित गरी नागरिकता लिने आदि सबै अधिकारबाट बन्चित हुनु पर्छ ।” नेकपाको यो निर्णय मानवअधिकार र लोकतन्त्र विरोधी निर्णइ भएको हुनाले सबै न्यायप्रेमी जनतालाई जनविरोधी निर्णयको विरोध गर्न उनले आग्रह पनि गरे ।